Goobaha Khadka Tooska ah ee Bolivian - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka Tooska ah
(455 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ... Qamaarista Bolivia
Khamaarka Bolivia ma ahan mid aad u horumarsan, maxaa yeelay khamaarista oo dhami waxay ahayd sharci darro qarnigii la soo dhaafay. 1930, khamaarka waxaa laga mamnuucay meelaha macdanta laga qodo ee dalka, sanadkii 1938-dii gabi ahaanba waa la mamnuucay. Waxay qaadatay in ka badan 60 sano, abuuritaanka dhul barwaaqo ah oo loogu talagalay horumarinta khamaarka sharci darrada ah. Si looga hortago kobcinteeda, 1996 dowladda waxay ku qasbanaatay inay siiso rukhsad ku meel gaar ah 200 qol oo ah mashiinno lagu ciyaaro iyo qamaarro. Khamaarista Bolivia LONABOL waa la kormeeray ilaa 1996 (guddiga bakhtiyaa nasiibka ee samafalka iyo caafimaadka).
2002, casinos mar labaad ayaa la sharciyeeyay. Sannadkii 2011, waxaa abuuray hay'adda gobolka ee loo oggolaaday inay bixiso rukhsad (oo shaqeyneysa 10 sano) iyo in la xakameeyo khamaarka Bolivia. Waqtigaan la joogo, waddanku wuxuu leeyahay oo keliya 4 wadaha khamaarka sharciga ah: Lotex, Corhat, Jet Games iyo Star Mirage. In Bolivia, sidoo kale waa khamaar sharci darro ah baahsan. Qiyaastii 200 hoolalka ciyaarta iyo in ka badan 4,000 oo ah mashiinno naadi ayaa si sharci darro ah ku shaqeeya.
Khamaarinta online ee Bolivia
Dowlada Bolivia ayaa ka gaabisay wax ka qabashada arinta qamaarka internetka. Waqtigan xaadirka ah, ma jiraan sharciyo iyo qawaaniin, oo tilmaamaya khamaarka internetka, dowladda Boliviana ma aysan qaadin wax tallaabo ah oo ay uga hortageyso ciyaaryahanka inuu galo goobaha ay ka shaqeeyaan ajaanibta. Meelo badan oo ajaanib ah oo khamaar ku leh khadka tooska ah waxay ku bixiyaan adeegyo af Isbaanish ah, qaarkoodna xitaa waxay taageeraan lacagta gudaha.
Liistada Liiska 10 Bolivian Online Casino
Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoy ka socota Bolivia
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbalaya ciyaartoy ka socota Bolivia, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka bilaabanta mashiinnada ciyaarta ilaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa dib u eegistayada bogagga internetka ee khadka tooska ah, si aad uga feejignaato dhiirrigelinta khadka tooska ah ee ugu wanaagsan, gunnooyinka iyo xulashooyinka lacag bixinta ee ay heli karaan ciyaartoy ka socota Bolivia.
Boggaga internetka ee poker oo aqbala ciyaartoy ka socota Bolivia
Eeg liiska boggaga internetka ee turubka ee aqbalaya ciyaartoy ka socota Bolivia, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Ku raaxayso kala duwanaanshaha badan ee roulette, blackjack, Hold'em, iyo ciyaaraha kale ee kaararka. Wixii macluumaad dheeraad ah, akhri dib u eegistayada boggaga internetka ee aqbalaadda ciyaartoy ka socota Bolivia.
Goobaha ciyaaraha isboortiga ee isboortiga, iyagoo ka qaadanaya ciyaartoy Bolivia ah
Eeg liiska boggaga internetka ee sharadka ee isboortiga, ka qaadashada ciyaartoy ka socota Bolivia, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Dhig khamaaristaada, ka xulo waxa ugu habboon Dhacdooyinkaaga koeffitsinty oo ka mid ah soo-jeedinta dhowr iyo toban daraasad sameeyeyaal khadka tooska ah ka sameeya Bolivia. Iyo wixii macluumaad dheeraad ah, tixraac boggaga dib-u-eegista ee sharadka isboortiga ee khadka tooska ah, adigoo ciyaartoy ka qaadaya Bolivia.
Boggaga internetka ee bingo oo aqbala ciyaartoyda Bolivia
Eeg liiska boggaga internetka ee bingo, ciyaartoy ka soo qaadista Bolivia, oo siiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa dib-u-eegistayada bogagga shabakadda ee bingo ee sharraxaya dallacsiinta, gunnooyinka iyo hababka dhigashada ee goobaha bingo-ka ee laga heli karo ciyaartoy ka socota Bolivia.
Goobaha ciyaaraha khamaarka oo aqbala ciyaartoy ka socota Bolivia
Eeg liiska boggaga ciyaaraha moobiilka, ka qaadashada ciyaartoy ka socota Bolivia, oo siiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka bilaabanta mashiinnada ciyaarta ilaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa boggaga dib-u-eegista ee khamaarka moobiilka si aad uga feejignaato dhiirrigelinta khadka tooska ah ee ugu fiican, gunnooyinka iyo xulashooyinka lacag-bixinta ee ay heli karaan ciyaartoy ka socota Bolivia.
0.1 Khamaarinta online ee Bolivia
0.2 Liistada Liiska 10 Bolivian Online Casino
2.1 Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoy ka socota Bolivia
2.2 Boggaga internetka ee poker oo aqbala ciyaartoy ka socota Bolivia
2.3 Goobaha ciyaaraha isboortiga ee isboortiga, iyagoo ka qaadanaya ciyaartoy Bolivia ah
2.4 Boggaga internetka ee bingo oo aqbala ciyaartoyda Bolivia
2.5 Goobaha ciyaaraha khamaarka oo aqbala ciyaartoy ka socota Bolivia
supernova casino lahayn wax gunno ah oo gunno ah